स्वास्थ्य – PuraKhabar
काठमाडौं / जनैखटिरा (हर्पसजोस्टर) एक प्रकारको भाईरल ईन्फेक्सन हो । यसलाई पीडादायक समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । किनभने छालामा देखिने यो रोगमा स-साना पानीफोका जस्ता आउने खटिराहरु चिलाउनुका साथै असह्य रुपले दुख्ने किसिमको हुन्छ । चिकनपोक्सको भाईरस (भेरिसेला जोस्टर) भाइरसको संक्रमणले यो रोग लाग्दछ । डाक्टरी भाषामा यसलाई हर्पसजोस्टर भनिन्छ भने गाउँघरमा जनैखटिरा पनि भन्दछन् । जनैखटिरा सबै उमेरका मानिसलाई हुन सक्छ । प्राय:गरी यो रोग त्यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ, जसलाई पहिला ठेउँला (चिकेनपोक्स) भएको वा चिकेनपोक्सको एक्सपोजर भएको होस् । त्यस्ता व्यक्तिलाई हर्पसजोस्टर हुने संभावना प्रबल हुन्छ । कारण के…
झविन्द्र देवकोटा नवलपरासी, २ असार । नवलपरासीको प्रतापपुर नगरपालिकामा शनिबार वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा औषधी वितरण कार्यक्रम गरिएको छ । भारतीय सीमानाका नजिकै रहेको तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अभाव रहेको प्रतापपुरमा बुटवलमा रहेको इनरव्हील क्लव अफ बुटवलले स्वास्थ्य शिविर गरेको हो । लुम्विनी सिटी हस्पिटल र नेशनल प्याथ ल्याव बुटवलको प्राविधिक सहयोगमा भएको कार्यक्रममा प्रतापपुर र त्यस आसपासका गाउपालिकाहरुका एक हजार पाँच सयबढीले शिविरबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका थिए । शिविरमा मेडिकल, हाडजोर्नि, स्त्री तथा प्रसुती, नाक, कान, घाटी लगायतका समस्या भएकाले शिविरबाट सेवा लिएका थिए भने उनीहरुले औषधी समेत…
June 14, 2018 June 14, 2018 पुराखबर
गर्भपतन अब अधिकार र कसुर दुवै हुने भएको छ ।महिलाका हकमा गर्भपतन संविधानमा मौलिक हकअन्र्तगत राखिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गर्भपतन कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर गर्भपतन गराउन दबाब दिनेका हकमा कायम हुनेछ । कुनै पनि महिलाले आफ्नो ईच्छाबमोजिम विवाह नगरी सन्तान जन्माउन सक्ने अधिकार कानुनले सुरक्षित गर्न लागेको छ ।सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा यो अधिकार सुरक्षित गरिएको हो ।संविधानको मर्मअनुसार प्रजनन अधिकारलाई कानुनमा सुरक्षित गरिएको मन्त्रालयकमा प्रवक्ता ढकालले बताए ।संविधानले नै विवाह नगरी महिलालाई सन्तान जन्माउन सक्ने हकको व्यवस्था गरिसकेको…
सरकारी अस्पतालका निजी फार्मेसी बन्द गरिने !
June 7, 2018 पुराखबर
सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पर्याप्त हुनेगरी आफ्नै सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो ।वीर अस्पतालले निजी ‍औषधी पसललाई सटर भाडामा दिँदा ‍सर्वसाधारणले चर्को मूल्यमा ‍औषधि खरिद गर्नुपरेको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले निवेदन दर्ता गरेका थिए । याे खबर अाजकाे नागरिकमा छ । सर्वोच्चले वीरलगायतका सरकारी अस्पतालमा व्यक्तिलाई औषधि पसल गर्न भाडामा सटर दिनु स्वास्थ्य नीतिविपरीत भएको ठहर गरेको छ । ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ अनुसार…
यस्तो अवस्था भएका व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस अनार ,नत्र ज्यान जानसक्छ !
हरेक फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ। तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। तर यी ७ व्यक्तिले अनारले खानु राम्रो हुदैन। स्वस्थ्यमा सुधार आउनुको साटो झन् बिग्रिन सक्छ। १, तौल घटाउन चाहने व्यक्ति यदि तपाई आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने अनार नखानुहोस्। अनार खादा तौल घट्नुको साटो बढ्न थाल्छ। २, प्रेसर लो हुने व्यक्ति अनारमा पाइने एंटीऑक्सीडेंट्सका कारण प्रेसर लो हुने हुँदा प्रेसर लो हुने ब्यक्तिले अनार खानु हुदैन। ३, मधुमेह रोगि अनार खानाले सुगरको मात्रा बढ्ने हुदा मधुमेह रोगीले…
के आखा फर्फराउदा साच्चिकै शुभ-अशुभ हुन्छ ? जन्नुहोस !
June 1, 2018 June 1, 2018 पुराखबर
कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखा अचानक फर्फराउन थाल्छ । अनि हाम्रो देशमा आँखा फर्फराउनुलाई शुभ अशुभ फलसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । दाहिने आँखा फर्फराउँदा शुभ हुने अनि देब्रे फर्फराउँदा अशुभ हुने विश्वास गरिन्छ ।तर यो अन्धविश्वास मात्र हो । आँखा वरिपरिका मांशपेशीहरू संकुचित हुँदा आँखा फर्फराउँछ । यसका केही कारणबारे जानिराखौं : १. थकान र तनावका कारण आँखा फर्फराउँछ । तनाव कम गर्न सक्नुभयो भने आँखा फर्फराउन बन्द हुन्छ । राम्ररी निद्रा पुगेको छैन भने पनि आँखा फर्फराउँछ । २. धेरै मापसे गर्दा पनि आँखा फर्फराउँछ । ३. धमिलो बत्तीमा काम गर्दा…
बिहान उठेर यसो गर्ने गर्नुस तपाईको अनुहारमा आउनेछ यस्तो चमक (बनाउने बिधि सहित)
तपाइंको छाला धेरैजसो सुख्खा तथा फिक्का देखिने गर्दछ । मरेको छालाको कारणले गर्दा यसो भएको हो छालालाई चम्किलो तथा नरम बनाउनको लागि तपाइंले प्राकृतिक घरेलु उपायलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ । यो बिधि धेरै नै सजिलो हुनुका साथै प्रभावकारी छ । सामाग्रीहरु १) कागती २) थोरै नुन ३)चामलको पिठो ४) मह बनाउने बिधि पहिलो चरण – सबैभन्दा पहिला कागती लाइ दुई भागमा काट्नुहोस् । त्यसपछि आधि भाग कागतीमा थोरै नुन हाल्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा केहि बेरसम्म दल्नुभई सफा पानीले मुख धुनुहोस । दोस्रो चरण – यसपछि चामलको पिठोमा मह र अर्को बाँकी…
सरकारले गर्यो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर खारेज !
सरकारले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर खारेजको घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म शिक्षा सेवामा एक प्रतशत र स्वास्थ्य सेवामा जारी हुने बिजकको ५ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था थियो । सरकारको यो शुल्क हटाउने निर्णयले बहुसंख्यक नागरिकलाई लाभ मिल्नेछ । यस्तो सेवा शूल्क अहिले शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीबाटै असुलिरहेका थिए ।साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले लिादै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर पनि खारेज गरेको छ ।
सन्तानले आफ्ना अभिभावकलाई अनिवार्यरुपमा हेरचाह गर्नुपर्ने , ७० कटेकाको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गरिदिने !
सरकारले आगामि आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत दिँदै आएको वृद्धभत्ता वृद्धि नगर्ने भएको छ ।अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्धभत्ता वृद्धि नगरी ७० वर्षमाथिका बृद्धबृद्धालाई १ लाख रुपैयाँको बिमा गरिने बताएका हुन् । सरकारले सन्तानले आफ्ना अभिभावकलाई अनिवार्यरुपमा हेरचाह गर्ने कानुनी व्यववस्था गर्ने भएको छ भने दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भने रोक लगाएको छ|यसका साथै सरकारले ७० कटेका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ ।
मोटापनले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ ? जन्नुहोस एक दिनमा एक किलो तौल कम गर्ने डाइट प्लान !
May 28, 2018 पुराखबर
भारतका आयुर्वेदिक एक्सपर्ट र १० वटाभन्दा बढी स्वास्थ्यसम्बन्धि किताब लेखिसकेका डा. अबरार मुल्तानीले यस्तो डाइट प्लानबारे जानकारी दिएका छन् जसले तपाईं एक दिनमा एक किलो भन्दा बढी तौल घटाउन सक्नुहुन्छ । यो डाइट प्लानमा तपाईंले दुईवटा खानेकुरा खानुपर्छ । पनिर र अण्डा । यसका साथै ग्रिन टी पनि पिउनसक्नुहुन्छ । यो निकै सजिलो डाइट प्लान हो जसलाई जसले पनि फलो गर्न सक्छन् । यो डाइट प्लानमा भोको पनि बस्नुपर्दैन । डा. मुल्तानीका अनुसार यो एक हाई प्रोटिन र लो फ्याट कार्ब डाइट प्लान हो जसका कारण यसले शरिरको अतिरिक्त बोसो…